Musharaxiinta Dimuqraadiga ee Mareykanka oo balanqaadyo u sameeyay haweenka – Geelle Magazine
Musharaxa madaxweynaha ee Mareykanka ee ka tirsan Xisbiga Dimoqraadiga ah Joe Biden ayaa ballan qaaday inuu haweeney ka dhigan doono musharax madaxweyne ku-xigeen, haddii uu ku guuleysto loolankiisa.
“Haddii la ii doorto madaxweyne, golahayga wasiirada iyo maamulkaygaba waxay u ekaan doonaan dalka, waxaana ballan-qaadayaa in aan haweeney u magacaabi doono madaxweyne ku-xigeen,” ayuu yiri Joe Biden.
Musharraxa Madaxweyne ee lagu magacaabo Joe Biden oo horay u soo noqday madaxweyne ku-xigeen ayaa intii lagu guda jiray dood uu xalay la yeeshay ninka kula loolamaya musharaxnimada xisbiga Dimoqraadiga ee Bernie Sanders ayaa waxa ka hadlay doorka ay haweenka ku leeyihiin siyaasada dalka Mareykanka, sidoo kalena sheegay in ay u qalmaan in xilal muhiim ah loo magacaabo, “waxaa jira haween badan oo u qalma in berri ay noqdaan madaxweyne ku-xigeen,” ayuu yiri Joe Biden.
Musharaxa siyaasadda bidixda fog ee Mareykanka Bernie Sanders ayaa isna sidaa si la mid ah uga hadlay doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka Mareykanka , “Aniga, ma ahan oo kaliya inaan magacaabayo haween, waxaana xaqiijin doonaa inaan helno haweeney la jaanqaadda is-beddelada bulshada, waxaana jira haween badan oo sidaas ah,” ayuu yiri Bernie Sanders.
Laba goor ayaa taariikhda Mareykanka haweeney loo doorto in ay noqoto musharax madaxweyne ku-xigeen.
Musharaxii Dimoqraadiga ahaa ee Walter Mondale ayaa doortay in haweeney ay madaxweyne ku-xigeen u noqoto sanadkii 1984-kii, halka Sarah Palin ay ahayd haweeneydii uu sidaas oo kale u xushay John McCain oo ahaa Jamhuuri sanadkii 2008-dii, hase yeeshee labadaba waa looga adkaaday doorashada.
Xubnaha ay suurta-galka tahay in Joe Biden uu doorto waxaa ka mid ah Senator Kamal Harris iyo Senator Amy Klobuchar, oo labadaba ka haray loolanka musharaxnimada Dimoqraadiga ee sanadkan ama xitaa Elizabeth Warren oo si kooban mar u hogaamineysay tartankan.